January 2015 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Min Oaker at 12:22:00 AM 0
ဖုန်းကို အမိူက်တွေရှင်းလင်းသုတ်သင်ပြီး ပေါ့ပါးစေနိုင်မယ်-CCleaner v1.07.30 apk
Win Hlaing at 2:16:00 PM 0
Android ဖုန်းတွေကိုပေါ့ပါးမြန်ဆန်အောင်အမိူက်တွေရှင်းလင်းသုတ်သင်ပေးနိူင်တဲ့ CCleaner Version: v1.07.30 apk update လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိရဲ့ဖုန်းမှာရှိသမျ junk
Facebook 25.0.0.19.30 APK ( Official )
Maung Pauk at 9:01:00 PM 0
Facebook 25.0.0.19.30 APK ( Official ) : 31.5 Mb
Android အတွက် Facebook ဗားရှင်းသစ် 27.1.2015 ရက်နေ့ကတည်းကထွက်နေတာ.. မေ့နေလို့ ခုမှ တင်ပေးဖြစ်တယ်.. သတိထားရမှာက ဗားရှင်း 24.0.0.25.15 ကစပြီးနောက်ထွက်တဲ့ Update တွေကို Android 4.2 အောက်တွေမှာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး.. Update လုပ်ပြီးခါမှ ပြန်ဖြုတ်ရ၊ Log in ပြန်ဝင်ရ ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ.. ဒီဗားရှင်း 25.0.0.19.30 ကိုလည်း Android 4.3 နဲ့အထက်ရှိမှ Update လုပ်ကြဖို့ သတိပေးပါရစေ..
( Android အတှကျ Facebook ဗားရှငျးသဈ 27.1.2015 ရကျနကေ့တညျးကထှကျနတော.. မနေ့လေို့ ခုမှ တငျပေးဖွဈတယျ.. သတိထားရမှာက ဗားရှငျး 24.0.0.25.15 ကစပွီးနောကျထှကျတဲ့ Update တှကေို Android 4.2 အောကျတှမှော အလုပျမလုပျတော့ပါဘူး.. Update လုပျပွီးခါမှ ပွနျဖွုတျရ၊ Log in ပွနျဝငျရ ဖွဈနမှောစိုးလို့ပါ.. ဒီဗားရှငျး 25.0.0.19.30 ကိုလညျး Android 4.3 နဲ့အထကျရှိမှ Update လုပျကွဖို့ သတိပေးပါရစေ.. )
Calls Blacklist PRO v2.10.15 apk Full
Maung Pauk at 8:43:00 PM 0
Calls Blacklist PRO v2.10.15 apk Full : 523 Kb
ကိုယ့်ဖုန်းထဲကို မဝင်လာစေချင်တဲ့ Call တွေ၊ Message တွေနဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းကို သူများခိုးမဆက်ရအောင်၊ ခိုးပြီး Message ပို့လို့မရအောင် တားဆီးထားနိုင်တဲ့ Calls Blacklist PRO ဖြစ်ပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် v2.10.15 ကို Crack ပြီးသား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
( ကိုယျ့ဖုနျးထဲကို မဝငျလာစခေငျြတဲ့ Call တှေ၊ Message တှနေဲ့ ကိုယျ့ဖုနျးကို သူမြားခိုးမဆကျရအောငျ၊ ခိုးပွီး Message ပို့လို့မရအောငျ တားဆီးထားနိုငျတဲ့ Calls Blacklist PRO ဖွဈပါတယျ.. နောကျဆုံးထှကျ v2.10.15 ကို Crack ပွီးသား တငျပေးလိုကျပါတယျ.. )
Improved calls and SMS blocking
Numbers formatting added
Fixed silent mode bug
Calls Blacklist PRO v2.10.15 apk : 523 Kb
Real Driving 3D v1.4.1 [Mod] ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား APK
Maung Pauk at 6:49:00 PM 0
ဝယ်မစီးနိုင်ပေမယ့် ကားအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက်မောင်းနိုင်မယ့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.. 3D ရုပ်ထွက် အလန်းနဲ့မို့ ကြည့်ရတာလည်း အားရှိပါးရှိပါပဲ.. ပြိုင်ဆိုင်ရတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေကလည်း လန်ထွက်နေအောင် တော်ကြတယ်ဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ဒီဂိမ်းမှာ စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်.. ကားအမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၊ ကားလမ်းအမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီး စိတ်ရှိသလောက် မောင်းနှင်နိုင်ဖို့ ဒေါင်းပြီး မောင်းကြစို့.. :P
( ဝယျမစီးနိုငျပမေယျ့ ကားအမြိုးအစားအမြိုးမြိုးကို စိတျကွိုကျမောငျးနိုငျမယျ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ.. 3D ရုပျထှကျ အလနျးနဲ့မို့ ကွညျ့ရတာလညျး အားရှိပါးရှိပါပဲ.. ပွိုငျဆိုငျရတဲ့ ပွိုငျဘကျတှကေလညျး လနျထှကျနအေောငျ တျောကွတယျဆိုတော့ ကိုယျ့ရဲ့ ကြှမျးကငျြမှုကို ဒီဂိမျးမှာ စမျးသပျနိုငျပါတယျ.. ကားအမြိုးအစားအမြိုးမြိုး၊ ကားလမျးအမြိုးမြိုးကို စိတျကွိုကျရှေးခယျြပွီး စိတျရှိသလောကျ မောငျးနှငျနိုငျဖို့ ဒေါငျးပွီး မောငျးကွစို့.. :P )
SUV Tier Addded
New mountain map available!
Real Driving 3D v1.4.1 [Mod] ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား APK : 49.9 Mb
Maung Pauk at 6:24:00 PM 0
Advanced SystemCare Pro 8.1 Full Activated : 45.3 Mb
Computer ကို စောင့်ရှောက်ကုသပေးတဲ့ Software တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Advanced SystemCare ဟာ နာမည်ကြီး Utilities တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.. အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ Computer System ရဲ့ မှားယွင်းလာမှုတွေ၊ အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေကို စောင့်ကြည့်ကုသပေးပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း Activate လုပ်ပြီးသားကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
( Computer ကို စောငျ့ရှောကျကုသပေးတဲ့ Software တဈမြိုးဖွဈတဲ့ Advanced SystemCare ဟာ နာမညျကွီး Utilities တဈခုဖွဈပါတယျ.. အမွဲတမျးသုံးနတေဲ့ Computer System ရဲ့ မှားယှငျးလာမှုတှေ၊ အမှိုကျသရိုကျတှနေဲ့ ခြို့ယှငျးခကျြတှကေို စောငျ့ကွညျ့ကုသပေးပါတယျ.. နောကျဆုံးထှကျဗားရှငျး Activate လုပျပွီးသားကို တငျပေးလိုကျပါတယျ.. )
Advanced SystemCare Pro isapowerful, complete and the best system utility for Registry Fix, Privacy Protection, Performance Tune-up, and System Cleaning. Advanced SystemCare provides an all-in-one tool fixes stubborn errors, automatically and quietly in the background, cleans out clutter, optimizes internet and download speeds, ensures personal security and maintains maximum computer performance automatically.
Real-time monitor PC performance
Real-time update and Parent Control
Samsung Keypad_Schametic_Diagrams < A300/A400/A500/A800 >
Ye Naing at 5:22:00 PM 0
Download Link >> A300.rar
Download Link >> A400.rar
Download Link >> A500
Download Link >> A800
Farm Heroes Saga v2.18.7 [Mod] (ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား) apk
Maung Pauk at 3:21:00 PM 0
မိန်းကလေးတွေရော၊ ယောင်္ကျားလေးများပါ တော်တော် ကစားလာကြတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.. ပေါ့ပါးပြီး စိတ်ငြိမ်စေလို့ ကစားတာလို့ အချို့က ဆိုပါတယ်.. နောက်ဆုံးထွက် Farm Heroes Saga v2.18.7 ဗားရှင်းကို ပိုက်ဆံခိုးပြီးသား တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
( မိနျးကလေးတှရေော၊ ယောင်ျကြားလေးမြားပါ တျောတျော ကစားလာကွတဲ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ.. ပေါ့ပါးပွီး စိတျငွိမျစလေို့ ကစားတာလို့ အခြို့က ဆိုပါတယျ.. နောကျဆုံးထှကျ Farm Heroes Saga v2.18.7 ဗားရှငျးကို ပိုကျဆံခိုးပွီးသား တငျပေးလိုကျပါတယျ.. )
Farm Heroes Saga v2.18.7 [Mod] apk : 45.5 Mb
Adobe Master Collection အတွက် Master Collection CS6 with Crack
Aung Ko Htet at 2:40:00 PM 0
Adobe Master Collection ကိုကြိုက်ကြတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အကောင်းဆုံး CS6ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Adobe Series အစုံကို ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Full Version ဖြစ်အောင် crack file တွေပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ Crack File ကတော့ CS5အတွက်ပါ ပါတဲ့အတွက် ကြောင့် CS5Full Version မဖြစ်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
Microsoft Office 2013 Professional Plus Full Version [x64-x86] Free Download
Maung Pauk at 2:11:00 PM 1
Microsoft Office 2013 Professional Plus ကို Windows 32 bit အတွက်ရော 64 bit အတွက်ပါ ရယူနိုင်ပါပြီ.. Activate ဖြစ်ဖို့ Activator တစ်ခုခုနဲ့ သုံးနိုင်ပါတယ်.. အောက်မှာ တင်ပေးထားပါတယ်..
Microsoft Office 2013 Professional Plus ကို Windows 32 bit အတှကျရော 64 bit အတှကျပါ ရယူနိုငျပါပွီ.. Activate ဖွဈဖို့ Activator တဈခုခုနဲ့ သုံးနိုငျပါတယျ.. အောကျမှာ တငျပေးထားပါတယျ..
Microsoft Office 2013 Professional Plus x64 ( 1 Gb )
Microsoft Office 2013 Professional Plus x86[32bit] : 929 Mb
Activator Download Links
Password if you need = www.rian34.com
Unknown at 7:47:00 PM 0
မင်္ဂလာပါ စာပေဟောပြောပွဲ အသံဖိုင်များကို မျှဝေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်... မူရင်းတင်ထားတာကတော့ OnAir စာပေမှဖြစ်ပါတယ်.. စာပေချစ်သူများအတွက် ပြန်လည် မျှဝေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်နော်... ဒါကတော့ အမှတ်စဉ် ( ၁၂ ) ဖြစ်ပါတယ်.
Maung Pauk at 6:11:00 PM 0
Software တွေ Install လုပ်တဲ့အခါ .Net Frame ဘယ်လောက်ကို Install လုပ်မှ ရပါမယ်ဆိုတာကို ကြုံဖူးကြမှာပါ.. အဲဒီခါကျ .Net ဆိုတာကြီး ဘယ်နားသွားဒေါင်းရမှန်းမသိဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်... အဲဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နောက်ဆုံးထွက် Microsoft .NET Framework 4.6 RC ကို Offline Installer တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. Offline Installer ဆိုတာ အင်တာနက်မလိုဘဲ Install လုပ်နိုင်တာကို ပြောတာပါ.. Online မှာဆွဲရင် ဖိုင်ဆိုဒ်သေးသေးလေးနဲ့ .Net Frame ကို ရတတ်ပါတယ်.. အဲဒါက Online Installer ဖြစ်ပါတယ်.. အင်တာနက်ရှိမှ Install လုပ်တာ အောင်မြင်ပါတယ်.. ခု ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်တာက Offline Installer ဖြစ်ပါတယ်.. လိုအပ်တဲ့ OS ကတော့ အနည်းဆုံး Windows7Sp1 ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီး Windows7Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack2တွေ ရဲ့ ( 32 bit x 64bit ) Edition တွေကို Support ပေးပါတယ်..
( Software တှေ Install လုပျတဲ့အခါ .Net Frame ဘယျလောကျကို Install လုပျမှ ရပါမယျဆိုတာကို ကွုံဖူးကွမှာပါ.. အဲဒီခါကြ .Net ဆိုတာကွီး ဘယျနားသှားဒေါငျးရမှနျးမသိဖွဈနတေတျကွပါတယျ... အဲဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ နောကျဆုံးထှကျ Microsoft .NET Framework 4.6 RC ကို Offline Installer တငျပေးလိုကျပါတယျ.. Offline Installer ဆိုတာ အငျတာနကျမလိုဘဲ Install လုပျနိုငျတာကို ပွောတာပါ.. Online မှာဆှဲရငျ ဖိုငျဆိုဒျသေးသေးလေးနဲ့ .Net Frame ကို ရတတျပါတယျ.. အဲဒါက Online Installer ဖွဈပါတယျ.. အငျတာနကျရှိမှ Install လုပျတာ အောငျမွငျပါတယျ.. ခု ကြှနျတျော တငျပေးလိုကျတာက Offline Installer ဖွဈပါတယျ.. လိုအပျတဲ့ OS ကတော့ အနညျးဆုံး Windows7Sp1 ဖွဈရမှာဖွဈပွီး Windows7Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista Service Pack2တှေ ရဲ့ ( 32 bit x 64bit ) Edition တှကေို Support ပေးပါတယျ.. )
Microsoft .NET Framework 4.6 RC Offline Installer : 60.1 Mb
ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ အသံထွက်အကောင်းဆုံး Power DVD Ultra 14 Ultimate (Crack)
Aung Ko Htet at 2:32:00 PM 0
Media Software အစုံကို အသုံးပြုဖူးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကတော့ သိကြမှာပါ။ ရုပ်ထွက်အကောင်းဆုံးနဲ့ အသံထွက်အကောင်းဆုံးလို့ ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ Media Software ကတော့ Power DVD ပါပဲ။ အခု Power DVD က နောက်ဆုံး Version လေး ထွက်လာပါပြီ။ Full version ဖြစ်အောင် Crack file ပါ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ အားလုံးပဲ အကောင်းဆုံ Media Player ကို အသုံးပြုချင်ရင်တော့ အောက်က link ကနေ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Aung Ko Htet at 2:09:00 PM 0
vRoot ခေါ် RomasterSu For Android 2.1.1.150114.1000 apk
vRoot 2.1.1.150114.1000 apk : 4.09 Mb
vRoot ရဲ့ Android App တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ RomasterSu ကတော့ ဗားရှင်း 2.1.1.150114.1000 ကို 15.1.2015 ရက်နေ့က ဗားရှင်းသစ်ထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖုန်းထဲမှာတင် Root ဖောက်ပေးနိုင်ပြီး စွမ်းအားမြင့် Root apk တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်.. vRoot မှာပါတဲ့ Feature အတိုင်းပဲ vRoot apk သို့မဟုတ် RomasterSu မှာလည်း ရရှိနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်.. ဒါပေမယ့် RomasterSu apk ကတော့ root apk တွေထဲမှာ သိပ်မထင်ရှားပါဘူး.. vRoot For PC ကတော့ နာမည်ကြီးပြီး စွမ်းအား အကောင်းဆုံး Root Tool အဖြစ်ရပ်တည်နေပါတယ်..
( vRoot ရဲ့ Android App တဈမြိုးဖွဈတဲ့ RomasterSu ကတော့ ဗားရှငျး 2.1.1.150114.1000 ကို 15.1.2015 ရကျနကေ့ ဗားရှငျးသဈထုတျပေးလိုကျပါတယျ.. ဖုနျးထဲမှာတငျ Root ဖောကျပေးနိုငျပွီး စှမျးအားမွငျ့ Root apk တဈမြိုးလညျးဖွဈပါတယျ.. vRoot မှာပါတဲ့ Feature အတိုငျးပဲ vRoot apk သို့မဟုတျ RomasterSu မှာလညျး ရရှိနိုငျမယျလို့ဆိုပါတယျ.. ဒါပမေယျ့ RomasterSu apk ကတော့ root apk တှထေဲမှာ သိပျမထငျရှားပါဘူး.. vRoot For PC ကတော့ နာမညျကွီးပွီး စှမျးအား အကောငျးဆုံး Root Tool အဖွဈရပျတညျနပေါတယျ.. )
vRoot apk 2.1.1.150114.100 : 4.09 Mb
VRoot 1.8.0.12451 For PC Download